प्रचण्डकी बुहारी तथा खानेपानी मन्त्री बीना मगर बेपत्ता ! – Online Nepal
March 18, 2020 2021
काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोराबुहारी तथा खानेपानी मन्त्री बीना मगरलाई बे’पत्ताको सूचीमा सूचिकृत गरेको छ । माओवादी युद्धमा बे’पत्ता भएकाहरुको सूचीमा बीनाको नाम समावेश गरिएको हो ।
सरकारले माओवादी युद्धका बेला हराएकाहरुको पहिचान गर्न गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले खानेपानीमन्त्री बीना मगरलाई वेपत्ता व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको २५ सय ६ जना व्यक्तिको सूचीमा मन्त्री बीनालाई १९० क्रम संख्यामा समावेश गरेको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बे’पत्ताहरुको सूचीमा खानेपानी मन्त्री विना मगरको पनि नाम छ । कञ्‍चनपुरको कालिका ५ स्थायी ठेगाना भएकी मन्त्री मगरको नाम द्व’न्दकालमा बे’पत्ता भएको भन्‍ने उजुरीका आधारमा राखिएको बताइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिनेको नाम भने गोप्य राखिएको छ ।
मन्त्री मगर व्यस्त भएका बताउँदै स्वकीय सचिव विजयदेव भट्टराईले भने, “मन्त्रीज्यूलाई तत्कालीन द्व’न्द्वकालको समय अर्थात् २०६० सालमा शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरेको थियो । उक्त गिरफ्तारीपछि उहाँ गैरन्यायिक हिरासत भएको हुँदा बेपत्ताको उजुरी परेको थियो । उजुरी दर्ता हुँदाको अवस्थासम्म बे’पत्ता रहेकोले अहिले बे’पत्ताको सूची सार्वजनिक हुँदा उहाँको नाम रहेको हो ।”
२०६० सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले गिरफ्तार गरेर २७ महिनासम्म बे’पत्ता अवस्थामै भैरवनाथ गणमा २७ महिनासम्म गैरन्यायिक हिरसातमा रहेकी थिइन् ।
Prevभोलि चैत ६ देखि एसइई हुँदै गर्दा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दियो आज यस्तो सूचना !
Nextकाठमाण्डौका यी मनकारी घरधनी, कोरना भा’इरससंग लड्न क्वारेन्टाइनको लागि आफ्नो घर नि:शुल्क दिदै !